केयूकेएल मेकानिकल शाखाको भ्रष्टाचार छानविन, सिइओ सहित बुढाथोकिलाई कारवाहि हुन सक्ने ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
केयूकेएल मेकानिकल शाखाको भ्रष्टाचार छानविन, सिइओ सहित बुढाथोकिलाई कारवाहि हुन सक्ने ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को इलोक्टोनिक मेकानिकल शाखासहित अन्य शाखाको भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा अख्यिार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान आर्कषण भएको छ ।
नेपाली जनता अनलाइन पत्रिकाले नियमित केयूकेएलको भ्रष्टाचार र अनियमित ढंगले भएका कामहरुको उजागर गर्दै आएको छ । यहाँ भएका भ्रष्टाचारले सिमा नाग्न थालेका समाचार प्राप्त भएपछि हामिले नियमित जस्तै समाचार प्रकाशित गर्दै आएका छौं ।
इलोक्टोनिक मेकानिकल शाखा र महाकालचौर शाखाका समाचार प्रकाशित भएपनि यहाँको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा केहि सूधार भएपनि यहाँ हुने गतिविधि सून्य भने हुन सकेको छैन ।
मेकानिकल शाखाको भष्टाचारको समाचारलाई आधार बनाएर केहि केयूकेएलसँग सरोकार राख्नेहरुले अख्तियारमा हालेको उजुरीपछि अख्तियारले खानेपानी मन्त्रालयलाई के भएको हो, छानविन समिति गठन गरि सत्य तथ्यमा आधारीत भएर प्रतिवेदन दिन आदेश दिएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
त्यहि आदेशमा टेकेर मन्त्रालयले कानून शाखाका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्य छानविन समिति गठन गरि छानविनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले अहिले सम्मभएका कामहरुको विवरण र भुक्तानीको भएका विलहरुको छायाँ कपि मागेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताएका छन ।
मेकालिनकल इलोक्टोनिक शाखाका प्रमुख कृष्णहरी बुढाथोकि प्रमुख भएपछि सो शाखाले पुरै उपत्यकाको भूमिगत पानीको स्रोतबाट पानी उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यहाँ भएका पम्प र टुयुवेल निर्माण र मर्मत समेत यसै शाखाले गर्दै आएको छ । बिशेष गरि मर्मतमा हुने अनियमितताले केयूकेएल थाला पर्दै आएको छ ।
कुनै पनि पम्प र टुयुवेल मर्मत गर्दा कुनै मापदण्ड अपनाएको देखिदैनन । प्राविधकिहरुले खरिद ऐन र नियमलाई मात्र पालना गरेको देखिन्छ । खरिद ऐन अनुसार पाँच लाखमा नबढ्ने गरि टुक्रा टुक्रा गरेर काम गरेको र हरेक पम्पहरुको मर्मत गर्दा पाँच लाख कै विल भुक्तानी हुने नियमलाई फ्लो गर्दै आएको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् 'संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको कमजोरी'
बुढाथोकिको भ्रष्टाचारलाई अवरोध गर्नेहरुलाई उनले तत्काल काजिशैलिमा फायर गरेर आफ्नो कुकर्मलाई सहज बनाउदै आएका छन । मिलनकुमार शाक्यलाई केयूकेएलको सिईओ बनाउदा ओजनदार आर्थिक सहयोग गरेका बुढाथोकि त्यहि समयदेखि चर्चामा आएका हुन ।
उनी समय अनुकुल शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्न निक्कै निपूर्ण पनि छन । यस पटक यो छानविनलाई आफु अनुकुल बनाउन छानविन समितिमा बस्नेहरुलाई दवाव दिन थालेको समेत बुझिन आएको छ । छानविन समितिका संयोजक कुनै दवाव र लोभलालचमा नफस्ने कर्मचारी भएका कारण छानविन निष्पक्ष हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । हुन, त यसै विषयमा सर्तकता केन्द्रले पनि गोप्यरुपमा छानविनलाई अगाडि बढाएको बुझीन आएको छ ।
त्यसैगरि केयूकेएलका सिइओले आफुलाई मन नपर्ने शाखाको भुक्तानी समेत रोक्दै आएका छन । उनले केहि समय अगाडि तीन ओटा बनाएका चेक रद्ध समेत गरेको थाहा भएको छ । चेक बनाएर पैसा मागेपछि ती शाखाले पैसा दिन आनाकानी गरेका कारण चेक रद्ध गरिएको सिइओलाई आरोप लाग्दै आएको छ ।
केयूकेएलका केहि कर्मचारीहरु सरुवा भएर जान रुचाउदैनन । उदाहरण लागि सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी आएपछि त्यो पानी प्रशोधन गर्न त्यहाँको पानी प्रशोधन केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा दरवन्दी ९ तहको भएपनि ७ तहको इन्जिनियर पठाएर सिइओले झरो टार्ने काम गरेका छन ।
केयूकेएलमा कार्यकारी फेर्ने खेल शूरु, बुढाथोकि र शाक्यलाई अख्तियारमा मुद्धा
२२,बैशाख.२०७८,बुधबार १५:१७ मा प्रकाशित
← नेपाली सेनाले अवकाशप्राप्त सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन
कान्ति अस्पतालमा थप पाँचजना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण →